आजदेखि पाँच लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा प्यान अनिवार्य, बजारमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ? - Aarthiknews
सरकारले निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नीति ल्याउँदै गएपछि त्यसको विरोधमा लगानीकर्ता उभिन पुगेका थिए । १८८१ अंकमा पुगेको शेयर बजार निरन्तर घटेर नेप्से ११८१ अंक नजिक आएपछि सरकारले ल्याएका नयाँ नीतिको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक सरकारले सबैलाई अनिवार्य गर्न लागेको प्यानको व्यवस्थालाई लिएर लगानीकर्ता आन्दोलित भएपछि सरकार त्यस्तो नीति ल्याउनबाट पछि हटेको थियो । शेयर लगानीकर्ताहरु प्यानका विषयमा घुँडा टेकेको बताउँछन् ।
आजदेखि पाँच लाखभन्दा बढी शेयर कारोबार गर्दा दोस्रो बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? आम लगानीकर्ताबीच यही विषयलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्न थालेका छन् । चिया पसलदेखि शेयर ब्रोकरसम्म प्यानले शेयर बजारमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
केही लगानीकर्ताले ठूलो कारोबार गर्नेले यसअघि नै प्यानमा दर्ता भई सकेकाले शेयर बजारमा खासै प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । अर्कोथरी लगानीकर्ता भने यसले शेयर बजारमा असर पार्ने बताउँछन् । प्यानका कारण एकपटकमा पाँच लाखभन्दा कम रकमको मात्र शेयर कारोबार गर्न थाल्दा शेयर बिक्रीमा समेत कमी आउने उनीहरुले आंकलन गरेका छन् ।
धेरै लगानीकर्ता प्यानमा दर्ता नभएकाले केही दिन त्यसको असर शेयर बजारमा पर्ने अनुमान ब्रोकरको छ । एक दुई दिन नेप्से घट्न सक्ने र कारोबार रकममा कमी समेत आउने उनीहरुको भनाइ छ ।पछिल्लो समय पाँच लाख वा त्यो भन्दा बढी मूल्यको शेयर कारोबार दैनिक एक सयको हाराहारीमा हुने गरेको गरेको नेप्से तथ्यांकले देखाउँछ ।